Radio Don Bosco - Fambolena biolojika...
ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fantana mitsitsy ihany koa, ny fambolena biôlôjika miara-dia amin'ny famokarana sy fampiasana ny zezika kankana.
Efa noresahina im-betsaka ny momba ny teknika noketrehan'ingahy Ranaivoarisoa Basile momba ny fambolena biôlôjika ampiasana ny zezika kankana. Misy fihavahany ny teknikany, noho ny fikarohana tsy mitsahatra, mba hanatsaràna sy hampahomby hatrany ny vokatra azo avy aminy. Misy indray ny voka-pikarohana vaovao noho izay fanatsaràna izay. Hirika hozarain'i Pape Bio, ny zava-baovao momba ity famokarana zezika kankana ifotorany ity.